Iindaba -Izigqibo ezichaphazela amaxabiso ejammer yomnxeba weselfowuni
Into ethatha isigqibo echaphazela amaxabiso ejammer yomnxeba weselfowuni
Kuzo zonke iiprojekthi zokukhusela imiqondiso edlulileyo, elona candelo libonisa elona xabiso yimfuno yokwenyani yomthengi, oko kukuthi, eyona nto ichaza ixabiso lixabiso lokufunwa ngumthengi. Umzekelo, kwindawo yangaphakathi ye-50m * 50m, iindleko zezikhululo ezisisiseko ezingasetyenziswanga ziya kuba sezantsi kunezo zezitishi zesiseko; Iindleko zegumbi elivulekileyo ngaphandle kwendawo yokuhlala ziya kuba ngaphantsi kunaleyo ikhuselekileyo; Iiyure ezingama-24 ezingaphazanyiswanga ezipheleleyo-zokukhusela ibhendi ziya kuba zitshiphu kunangexesha lokuphakama Ixabiso lokukhuselwa kwamanye amabhendi amaza liphantsi; Ixabiso lokuvavanywa kwetyala elirhabaxa (nje ukukhusela iziko) lingaphantsi kunelo lokukhusela ngokuchanekileyo; njl.
Kwiprojekthi, ngokweemfuno zabathengi, ubume besiza kunye namandla esignali yerediyo, inkqubo yokukhusela ihlala yakhiwa ngohlobo lokusingathwa komamkeli + wokusasazwa kwe-eriyali. Le yiteknoloji ethembekileyo nesebenzayo ethembekileyo kwicandelo lokukhusela. Indlela yokukhusela ekhethwe yiarhente yezokhuseleko ithembeke ngakumbi kunesixhobo esinye, kwaye ixabiso layo liyahluka ngokobungakanani bendawo ekhuselayo kunye nendawo ekuyo indawo.
Kusapho, abanye abazali banexhala lokuba abantwana babo baya kuba likhoboka leenethiwekhi kwaye bayakuthathela ingqalelo ukuthenga iijammers, kwaye bahlala bethenga ngasese amajammer amakhulu amakhulu amawaka eedola. Ezi zixhobo ziya kuphazamisa ngokuthe ngqo ukusetyenziswa kweefowuni eziphathwayo ebumelwaneni. Abaqhubi abathathu baphambili bazakuqhuba uphando emva kokufumana isikhalazo. Ukuba bayafunyanwa, banokuba phantsi kwezohlwayo ezingekho mthethweni.
Ke ngoko, into ethatha isigqibo kwixabiso lejammers yefowuni ephathekayo yimfuno yomsebenzisi. Iimfuno zokukhusela ziphezulu kwaye ixabiso liphezulu, kwaye ixabiso eliphantsi liya kuncitshiswa. Nangona kunjalo, injongo yoqobo yokukhusela kukufezekisa isiphumo ngaphandle kokuchaphazela umntu wesithathu, ke ikhaka eligqibeleleyo alisoze libize kakhulu. Umthetho wexabiso uyalela